EZINỤLỌ EKSIMESI NA AFỌ ỌHỤRỤ!
Zhejiang Shawei Digital Technology na-achọ gị ekeresimesi obi ụtọ yana mee ka ị nweta ihe niile mara mma nke ekeresimesi.December 24, taa, bụ Christmas Eve.Shawi Technology ezipụla ndị ọrụ uru ọzọ!Ụlọ ọrụ ahụ akwadola mkpụrụ osisi Peace na onyinye ...
Shawei Digital's Autumn Birthday Party na Mmemme Mwube Otu
Na Ọktoba 26, 2021, ndị ọrụ Shawei Digital Technology gbakọtara ọzọ wee mee mmemme Mwube Otu mgbụsị akwụkwọ, wee jiri mmemme a mee emume ụbọchị ọmụmụ nke ụfọdụ ndị ọrụ.Ebumnuche nke mmemme a bụ ikele ndị ọrụ niile maka mgba ha na-agbasi mbọ ike, un...
Ememe ncheta ọmụmụ
site admin na 21-01-05
Anyị nwere a na-ekpo ọkụ ụbọchị ọmụmụ party na oyi oyi, iji mee ememe ọnụ na jide a n'èzí BBQ. The ụbọchị ọmụmụ nwa agbọghọ nwekwara a red envelopu si ụlọ ọrụ.
Shawi Digital Summer Sports nzukọ
Iji mee ka ikike ịrụkọ ọrụ ọnụ sikwuo ike, ụlọ ọrụ ahụ haziri ma hazie nzukọ egwuregwu n'oge okpomọkụ. N'ime oge a, a na-ahazi ihe omume egwuregwu dị iche iche iji mpi na Chile maka nzube nke ime ka nhazi, nkwurịta okwu, enyemaka aka na mmega ahụ nke ...
Ọzụzụ ụlọ ọrụ
Iji ka mma na-ejere ndị ahịa ozi, ghọta ihe ha chọrọ, SHAWEI DIGITAL na-ejide ọzụzụ ọzụzụ maka otu ndị ahịa, ọkachasị akara ọhụrụ ihe na ọzụzụ igwe obibi.Ewezuga klaasị ịntanetị sitere na HP Indigo, Avery Dennison na Domino, SW LABEL na-ahazikwa ileta mbipụta
N'èzí BBQ Party
Shawei digital Hazie n'èzí omume mgbe nile iji kwụọ otu na a ọhụrụ obere goal. Nke a bụ a na-eto eto na ume otu, na-eto eto na-ahụ n'anya mgbe ụfọdụ ọrụ okike na ihe omume.
AKWỤKWỌ CHINA —MOYU na-eduga nnukwu usoro mgbasa ozi
Shawei Digital gara SIGN CHINA kwa afọ, tumadi na-egosi "MOYU" , a na-eduga ika na ahịa maka ọkachamara Large format obibi akwụkwọ mgbasa ozi.
SW Label setịpụrụ ụbọchị abụọ n'èzí ịgbatị ma jikwaa ndị otu niile nọ na Hangzhou, iji mee obi ike na ịrụkọ ọrụ ọnụ.N'oge omume ahụ, ndị otu niile na-arụkọ ọrụ ọnụ karịa.Na nke ahụ bụ omenala ụlọ ọrụ-Anyị bụ nnukwu ezinụlọ na Shawi Team!
LABEL EXPO Ngosipụta DJITAAL LABEEL
SW LABEL gara ihe ngosi LABEL EXPO, na-egosikarị usoro akara dijitalụ niile, sitere na Memjet, Laser, HP Indigo ruo UV Inkjet.Ngwaahịa ndị mara mma dọtara ọtụtụ ndị ahịa ka ha nweta ihe nlele.
APPP EXPO na Shanghai maka mgbasa ozi mbipụta obosara 5M n'efu
SW Digital gara APPP EXPO na Shanghai , tumadi iji gosi nnukwu usoro obibi akwụkwọ mgbasa ozi, max obosara bụ 5M.Na ihe ngosi ngosi na-akwalitekwa ihe ọhụrụ nke mgbasa ozi "PVC FREE".
Ime njem n'èzí nke Shawei na The Great Angie Forest
N'oge okpomọkụ na-ekpo ọkụ, ụlọ ọrụ ahụ haziri ndị otu niile ka ha gaa njem njem na Anji iji sonye na njem nlegharị anya n'èzí. A haziri ogige ntụrụndụ mmiri, ebe ntụrụndụ, ebe a na-eri mmanya, ịrị elu ugwu na rafting. na ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ.Ka anyị na-abịaru nso na okike ma na-ekpori ndụ onwe anyị ụtọ, anyị na-echekwa ...
N'onwe Gị Okpomọkụ Nyefe Vinyl nrapado
Njirimara ngwaahịa: 1) vinyl nrapado maka ịkpụ plotter ma kenkowaputa na matte.2) mgbaze nrụgide mmetụta na-adịgide adịgide nrapado.3) Akwụkwọ Silicon Osisi-Pulp kpuchiri PE.4) Ihe nkiri PVC kalenda.5) Ruo 1 afọ anwụ ngwa ngwa.6) Mgbochi siri ike na ihu igwe.7) 35+ agba ịhọrọ 8) Nyefee ...